Izibalo zeNtengiso yeVidiyo ekusenokwenzeka ukuba ubungazazi! | Martech Zone
Izibalo zeNtengiso yeVidiyo ekusenokwenzeka ukuba ubungazazi!
NgoLwesibini, Meyi 16, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Nokuba ziividiyo zentlalo, amabali emihla ngemihla, iividiyo zexesha lokwenyani, okanye nasiphi na isicwangciso sevidiyo, sihlala kwihlabathi apho umxholo wevidiyo uveliswa kwaye utyiwa kunakuqala. Ewe kunjalo, lithuba elihle kunye nomceli mngeni omkhulu kuba umxholo wevidiyo uveliswa kwaye awuzange ubonwe. Le infographic evela Umakhi weWebhusayithi.org.uk ityhila ubalo lwamva nje lwevidiyo.
Iinyani ezili-10 malunga nokuThengiswa kweVidiyo
I-78.4% yabasebenzisi baseMelika babukela iividiyo ezikwi-Intanethi
Amadoda achitha i-44% ngaphezulu kwexesha kunabafazi kwi-YouTube
Iminyaka engama-25-34 e-United States ineyona ndawo iphezulu yokungena kwevidiyo kwi-90%
Isiqingatha sabo bonke abantu baseMelika (i-164.5 yezigidi) babukela iTV yedijithali ngo-2016
I-72% yabathengisi bezentlalo bafuna ukufunda ukuthengisa ividiyo
Ividiyo kwimidiya yoluntu yonyusa ukwabelana ngokuphindwe kalishumi
Ngokuka-Facebook, ngo-2018, i-90% yomxholo wabo iya kuba sevidiyo
I-96% yabo bonke abathengisi batyale imali kwintengiso yevidiyo ngo-2016
I-70% yeearhente zentengiso zikholelwa ukuba iintengiso zevidiyo zinjalo okanye zisebenza ngakumbi kuneTV
Ingeniso epheleleyo ye-ROI yevidiyo ehambelana nomabonwakude ngamaxesha angama-1.27 aphezulu xa isetyenziswa kumabonwakude
Akukho nto yenzekayo yokuba asisebenzi ekuguquleni eyethu Isitudiyo sepopcast saseIndianapolis Kwisitudiyo esipheleleyo sevidiyo esinamandla exesha langempela. Siyaqhubeka nokubona iziphumo ezilungileyo ngevidiyo-kufuneka nje sihambe ngokukhawuleza ukuze sizuze kuyo. Umceli mngeni kukuba isoftware kunye nezixhobo eziyimfuneko ziyawa amaxabiso ngelixa zidibanisa amandla asasazekayo ewebhu. Ukuba sidilika kwangoko kakhulu, siza kuchitha imali eninzi kakhulu. Kodwa ukuba sitsibela emva kwexesha kakhulu, siza kuwuphosa umfutho!
Njengamaxesha onke, ndiza kwabelana ngolwalathiso esiya kulo nawe!
tags: izibakalaIiVidiyo zeNtengisoukuthengisa ividiyoiinyani zentengiso yevidiyoizibalo zentengiso yevidiyoizibalo zentengiso yevidiyowebsite UmakhiUmakhi weWebhusayithi.org.uk
Iingcebiso ezi-5 ngokubhalwa kweMxholo wokuThengisa oqhuba ixabiso leShishini
Umbonisi: Enye indlela yasimahla yeAdobe Illustrator